Baolina vy mitondra vy, baomba vy tsy misy fangarony, baomba vy karbaona - Kangda
Yuncheng Kangda Steel Ball Co., Ltd. dia naorina tamin'ny taona 2000 ary miorina ao amin'ny Faritanin'i Shandong, Sina. Manakaiky ny seranan-tsambo Qingdao sy seranan-tsambon'i Tianjin izany, izay mora alefa any ivelany. Ny baomba vita amin'ny vy Condar dia efa nanondrana nandritra ny folo taona, izay nanondrana indrindra tany Eropa, Amerika, Azia atsimo atsinanana ary toerana hafa, ary nahazo ny fahatokisana sy ny fanohanan'ny mpanjifa erak'izao tontolo izao. Ny orinasa dia afaka manome ny mpanjifa ROHS, REACH, ISO ary mari-pahaizana fanamarinana iraisam-pirenena hafa hanaterana ny fanondranana entana.
Niorina tamin'ny 2000
12 taona niainany fanondranana
Mihoatra ny 30 tapitrisa ny sandan'ny fanondranana